Baby – စာမကျြနှာ5– Healthy Life Journal
ကလေးမှာ မွေးရာပါ ခြေထောက်ခွင်နေသလား . .
Q. ကျွန်မကလေးမွေးလာတုန်းကတော့ သတိမထားမိပေမယ့် ခြေထောက်ခွင်နေသလို ဖြစ်သလားထင်မိတယ်။ မွေးရာပါ ခြေထောက်ခွင်တာကို ဘယ်အချိန်မှာ သိရှိနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ မကုဘဲထားမိရင် ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ A. ရောဂါကိုသိရတဲ့ အချိန်ကတော့ ကလေးငယ်ဟာ မွေးမွေးချင်း...
သံလိုက်ငယ်လေးများကို မျိုချမိပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ရသည့် ၆နှစ်အရွယ်ကောင်လေး
ကိုထက် အသက်ခြောက်နှစ်အရွယ် အဗီဆန်းဟာ ဟောလိုးဝင်းပွဲတော်မှာဝတ်ဆင်ဖို့ တစ်လလုံးစိတ်အားထက်သန် နေခဲ့ပေမယ့် တကယ့်ဟောလိုးဝင်းပွဲတော်နေ့မှာတော့ ဗိုက်နာပြီး နေလို့မကောင်းလို့ ဘယ်မှမသွားခဲ့လိုက်ရပါဘူး။ အဗီဆန်းရဲ့မိဘတွေက မသန့်တဲ့အစားအစာစားမိလို့ ဗိုက်အောင့်တယ်ဆိုပြီး ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဗီဆန်းဟာ သုံးရက်ဆက်တိုက်အန်ပြီး ၀မ်းဗိုက်အလွန်နာကျင်လာတဲ့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှာ...
ရက်ပေါင်း တစ်ထောင်နှင့် မိခင်၊ ကလေး ကျန်းမာရေး
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် ဒါမှမဟုတ် ကလေးယူတော့မယ်ဆိုရင် မိခင်လောင်းတွေရဲ့ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်ကို သေချာဂရုစိုက်ပေးဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ မိခင်လောင်းလေးတွေဟာ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ဥာဏ်ရည်ပြည့်ဝတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေ မွေးဖွားနိုင်ဖို့အတွက် Healthy Eating, Healthy Lifestyle...
ကလေး ဘာကြောင့် မရသေးတာလဲ . . .
မေး ။ သမီးအိမ်ထောင်ကျတာတစ်နှစ်ကျော်ပါပြီ။ သားသမီးမရသေးလို့ပါ။ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးရော စစ်ပြီးပါပြီ။ နှစ်ယောက်လုံး အဖြေကောင်းပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက အတူတူနေပြီးတာနဲ့ သုက်ရည်က အကုန်ပြန်ထွက်ကုန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ကလေးမရသေးတာလား။ ပက်လက်အနေထားနဲ့ ငြိမ်ငြိမ်နေရင်လည်း ချက်ချင်းပြန်ထွက်ကုန်ပါတယ်ရှင့်။ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ...
မေး ။ သမီးအသက် ၂၅နှစ်ပါ၊ အိမ်ထောင်ကျတာ ၅ လရှိပါပြီ။ အခု ကလေးလိုချင်လို့ပါရှင်။ ပထမ ၁လ ကို ဆေးကတ်သောက်ပါတယ်၊ ရာသီလာပါတယ် ဆရာ။ ဒုတိယ ၁လကို ၃လခံတားဆေး ထိုးလိုက်ပါတယ်ဆရာ။ ထိုးလိုက်တဲ့ ၁၂ပတ်အတွင်း ရာသီလုံးဝ...
ကိုယ်တစ်ခြမ်းမလှုပ်ရှားနိုင်ဘဲ မွေးဖွားလာသော်လည်း ခရစ္စမတ်နေ့တွင် စတင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့သည့် သမီးလေး
၊ လရိပ်မေ ၊ အေမီဟာ အသက်တစ်နှစ် မွေးနေ့အထိတောင်နေနိုင်မှာ မဟုတ်လောက်ဘူး၊ တကယ်လို့ အသက်ရှင်ခဲ့ရင်လည်း သူခံစားနေရတဲ့ နာတာရှည် အာရုံကြောရောင်ရမ်းမှုဆိုင်ရာရောဂါ (CIDP)ကြောင့် လှုပ်ရှားမှုလုပ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆရာဝန်တွေက အေမီရဲ့မိသားစုကို သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အေမီက အအေးမိဝေဒနာဖြစ်ရင် ဝေဒနာကိုတွန်းလှန်ဖို့ အားနည်းလွန်းတဲ့အတွက်...
၊ ကိုထက် ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကာလအတွင်း နေ့စဉ် တစ်နေ့ကို ကြက်ဥ ၉လုံးနဲ့အထက်စားပေးပါက မွေးလာတဲ့ ကလေး ဥာဏ်ရည် မြင့်မားနိုင်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကြက်ဥမှာ ကိုလင်းဓာတ်အများအပြားပါဝင်ပြီး ကိုလင်းဓာတ်ဟာ ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ မှတ်သားနိုင်စွမ်းတွေကို များစွာ အထောက်အကူပြုတယ်လို့...
မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေစဉ် အမျိုးသမီးတွေက အပူအစပ်အစာကို စားသင့်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။ မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေချိန်မှာ မိခင်တွေက အပူအစပ်စာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ မိခင်အပူအစပ်စားရင် မွေးကင်းစကလေးမှာ လေထတာနဲ့ ကသိကအောက်ဖြစ်တာတို့ ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ထင်မြင်ချက် ရှိနေကြလို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ အရသာက ကလေးတွေအပေါ်...
ကလေးလက်ကောက်ဝတ်ကိုဆွဲမရာက အဆစ်လွဲခြင်း(Pulled Albow Syndrome)
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး ။ Pulled Albow Syndrome ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ ။ ဒီရောဂါ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ တချို့လူကြီးတွေက ကလေးငယ်လေးတွေကို စိတ်မရှည်ဘဲ လက်ကောက်ဝတ်ကနေ ဆတ်ခနဲ မတင်ပြီးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ...
မွေးကင်းစမှ ခြောက်လအထိ ကလေးငယ် အာဟာရပြည့်ဝစေရန်
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) ကလေးတွေရဲ့ အာဟာရရရှိတဲ့ အကြောင်း ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် အသက်တစ်နှစ်အရွယ်မှာ အာဟာရ ပြည့်ဝစွာရရှိဖို့က အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီအချိန်မှာ ကလေးတွေ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ဖို့နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးတာဟာ အမြန်ဆုံးနဲ့ အတိုးတက်ဆုံး အချိန်ဖြစ်လို့ပါ။ ကလေးတစ်နှစ်ပြည့်ချိန်ရှိသင့်သည့်...